चीनले कसरी बनाउला ६ दिनमा हजार बेडको अस्पताल ? - Himali Patrika
चीनले कसरी बनाउला ६ दिनमा हजार बेडको अस्पताल ?
हिमाली पत्रिका ११ माघ २०७६, 4:53 pm
अहिलेसम्म चीनमा ८३० जनामा कोरोनाभाइरस लागेको पुष्टि भएको छ, जसमध्ये कम्तीमा ४१ जनाको मृ त्यु भइसकेको छ।
शुक्रवार द ग्लोबल टाइम्सले चिनियाँ सेनाका १५० जना स्वास्थ्यकर्मी वुहान आइपुगेको पुष्टि गरेको थियो। तर तिनले नयाँ अस्पतालमा काम गर्ने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा भने उसले पुष्टि गरेको छैन। बिबिसी नेपालीबाट